Xaalad adag oo ay soo wajahday dadka ku nool Degmada Qoryooley - Awdinle Online
Xaalad adag oo ay soo wajahday dadka ku nool Degmada Qoryooley
February 22, 2020 (Awdinle Online) –Weerarkii Shabaab ay Arbacadii ku qaadeen Degmada Qoryooley ee Gobolka Shabellaha Hoose, kuna burburiyeen buundadii ugu weyneyd ee degmadaasi ayay xaalad adag soo wajahday degmadu.
Buundada ayaa ka mid ahayd laba buundo oo ku yaala Degmada Qoryooley, balse waxay tani ahayd middii ay adeegsan jireen gaadiidka xamuulka iyo kuwa kale ee ganacsiga geeya degmadaasi.
Saddexdii maalmood ee ugu dambeysay ayaan waxaan Degmada Qoryooley imaanin gaadiidkii ganacsiga iyo khudaarta keeni jiray, sida uu xaqiijiyay Siid Cali Ibraahim, Gudoomiyaha Degmada Qoryooley.
Gudoomiyaha Degmada Qoryooley ayaa sheegay in Shabaabku uu buundadaasi ku burburiyay gaari walxaha qarxa, ay ka soo buuxiyeen.
“Buundada ay u suurta-gashay inay qarxiyan ayay ku xireen gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay. Buundada hadda way baaba’san tahay, wax gaari ama dad ah ma mari karo haba yaraatee.” Ayuu yiri Gudoomiyaha.
Gudoomiyaha oo ka faah faahiyay caqabadda ka dhalatay burburka buundadaasi ayaa yiri “Burburka buundada waxay saamayn ku yeelatay tuulooyinka hoos-yimaada, sida Baxnaano, Teegow, Cabdi Cali iyo tuulooyin kaloo badan. Waxay kaloo saamayn ku yeelatay dalaga beeraha iyo khudaartii soo go’day inay gaadiidka keenaan Degmada Qoryooley. Halbowle ayay buundada u ahayd degmada, lafdhabarta degmada buundadaas ayay ahayd.”
Gudoomiyaha oo la hadlay Warbaahinta ayaa yiri “Ujeedadooda waxay ahayd inay degmada go’doon geliyaan, labada buundaba ay qarxiyan, laakiin mid ayuu Alle noo badbaadiyay.”
Previous articleMaqaal :-Af Qalaad Aqoonta miyaa?
Next articleXOG:-Khilaaf soo kala dhex galay mamulka gobalka banadir & wasiiro ka tirsan xukuumada somaliya